Umsebenzisi Russian yenza intetho kangaka kwimarike French ukuba paris ezemidlalo akayamkeli ngqo abadlali kunye idilesi yeposi eFransi silubhejo ekhuselekileyo. Vous pouvez consulter mon test sur 1xBet© pour avoir tous les détails. A retenir: inikeza isebenze kakuhle kwimarike, kuba kakhulu paris live, inikeza imida emikhulu eParis kunye nentlawulo ezininzi, kodwa interface wayo rough pretty. Qu’en est-il de son application mobile?
Inikeza yokubheja app hayi kuphela ezikhoyo ezilungiselelwe umxokozelo for Android, Windows Phone iOS kodwa inguqulo yeselula website yayo. Iinkcukacha ezibalulekileyo malunga app © 1xbet ngokubonwa:
✓ Paris, umbhalo, iidiphozithi notsalo smartphone kunokwenzeka
Ukuba ukhangela uguqulelo desktop lesayithi :
Xa sele iphumelele le ukuphululwa, 1xBet ucofe ikhonkco kwi kweli phepha ukuze ibhekiswe ngqo kwi oyibhukumeyikha home page. Kwikona ephezulu ekhohlo kule page, uya kufumana i icon phone. Nje nqakraza kuyo kwaye khetha i app Android uze ulandele imiyalelo.
Ukuba ukhangela le kwisayithi mobile :
Nqakraza kwakhona kwi link 1xBet lokuqala kweli phepha ukuze ibhekiswe ngqo kwi nxuwa home page. Emva koko uye emazantsi ephepha, uya kufumana umcebisi. Nqakraza kwaye ukhethe uguqulelo Android yesicelo kwaye ulandela inkqubo.
Thina ngokucacileyo Siyaleza ukuxhobisa wena ukukhangela kwisiza ukusuka smart okanye tablet onqwenela ngawo ukufaka isicelo. Ngokwenza ngolu hlobo, kufuneka ukukhangela le kwisayithi mobile. Ngokwenza ukusuka kwenye yezi zixhobo ungalayisha ngqo isicelo kuyo ci.1xBet Fumana le app
jikelele, uluvo lwam phezu 1xbet weselula positive. Isicelo ngokupheleleyo French Kulula kakhulu ukuba ukusebenzisa. Amanyathelo zobhaliso uqhagamshelo kulula. Enye inzuzo linani elikhulu iinketho imali ekhoyo kwi ukuphela mobile. Kwakhona Kumnandi ukuba ukukhetha phakathi app okuvumela bet imali yokwenene ukongezelela website ngokweemeko imikhwa amadlelo. ekugcineni, Ndicinga ukuba ngcono kakhulu i-app yenziwe ngaphezu isayithi, kodwa yinto efunwa.
INKXASO CLIENT UKUSEBENZISA NGENKQUBO APP
Sifumana zonke iindlela zonxibelelwano kwisiza, I esithandwayo ikati ukuthi kubonakaliswa khusi eligcweleyo. Kwakhona kuyenzeka ukuba kubiza umonakalo inani 0800 okanye ukusebenzisa email. Kuyo nayiphi na imeko uya kuba impendulo 48 iri français.null
On le ngongoma, Uguqulelo umxokozelo kuba kulinganiselwe kakhulu. Iinketho ezikhoyo kwi menyu evelayo entla kwasekunene. Imali tabs, notsalo yomlando ekhoyo. Oku kwakhona indawo apho khangela iziphumo ubhejo yangoku. Iinkcukacha Intlawulo kumiselwa nazo kule menu.
Kunika umdla ukwazi ukuba ulungise iindlela zayo umyalezo nge-SMS okanye email ngeziganeko nokwenyusa.
Okokuqala nqakraza kwi linki ingezantsi 1xBet. Kanye njengokuba Android okanye iOS iinguqulelo, nqakraza i icon yefowuni phezulu ekhohlo wephepha ( ubona umfanekiso umzekelo download uguqulelo Android). Emva koko khetha inguqulelo Windows uze ulandele imiyalelo ukuqala umxokozelo.
nqakraza kuqala ku ilinki ngezantsi 1xBet ukukhokelwa ngqo nxuwa yokubheja home page. Il vous suffit ensuite de vous rendre tout en bas de la page d’accueil et de cliquer sur » Version Complète ». Kuya kufuneka ukuba nqakraza phezulu kwe icon yefowuni kwi home page, uze ukhethe uhlobo Windows uze ulandele imiyalelo ukuqalisa download kwesicelo.